Gudoomiyaha Marko: Leygama saarin magaalada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Marko – Mareeg.com: Gudoomiyaha degmada Marko, Maxamed Cusmaan Yariisow oo ka hadlay dagaal xalay ilaa saaka ka dhacaya degmadaas ayaa sheegay in cidda halkaas weerartay tahay maleeshiyo beeleed kazoo horjeeda beeshiisa.
Yariisow oo saaka la hadlay Radio Risaala ayaa beeniyey in maleeshiyada isaga taabacsan laga qabsaday magaalada Marka, wuxuuna ku dooday in dagaalku ka socda banaanka magaalada.
“Dagaalku wuxuu xalay ka bilowday deegaan lagu magacaabo Waa Cuneynaa, Waa Cabeynaa, qolada soo duushana dib ayaa loo celiyey, haddana wuxuu dagaalku ka socda meelka ku dhow Buufow, aniguna waxaan ku suganahay Marko” ayuu yiri Yariisow.
Yariisow oo la weydiiyey in qolada weerarka ku qaadday Marko yihiin ciidamada dowladda oo doonaya iney amaanka soo celiyaan, iyaguna ay dagaal kala hortageen ayaayiri “Ma jiraan ciidamo dowladeed soo weeraray magaalada, waxaa is haya beelihii maalamahan dagaallamay”.
“Dagaalka waxaa ku jira taliyaal kazoo jeeda beesha kale, kuwaasoo adeegsanaya dhashiikayaal, waxaana magaalada soo gaaraya rasaas liish ah” ayuu sidoo kale yiri Yariisow.
Dadka magaalada Marko ayaa sheegaya in la isla galay gudaha magaalada Marko ayna dadka badankood ku jiraan guryahooda, halka xaafadaha qaar laga cararayo.
Xaaladda gobolka Shabeellaha Hoose ayaa faraha ka baxday, iyadoo dowrka beeluhu uu si xoog leh usoo laabtay.